SPIEL'21 muEssen: "Kutiza kudiki kubva kuhupenyu hwemazuva ese" - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Oct 10, 2021 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, GAME muEssen, Events
SPIEL'21 ichaitika kubva Gumiguru 14 kusvika 17th - zvinooneka zvakasiyana kubva kune izvo vamwe vashanyi vangave vakajaira, asi nguva dzose vari panzvimbo muEssen. Kwenguva refu zvaisave kujeka kuti uye nenzira ipi mazuva emitambo yepasi rose aizoitwa gore rino nekuda kwedenda. Iko tarisiro ikozvino yakakura kune yakakura kwazvo yepasirese yekutengeserana kwemitambo yebhodhi, iyo inogona zvakare kuwanikwa neavo vese vasingaite nzira yavo kuenda kuEssen: iyo itsva online chikamu kubva gore rapfuura iripo zvakare.
Kutya kwekuvhiya kwenhamba dzekorona dzakatenderedza SPIEL'21 kusvika parizvino hadzisati dzaitika: Denda harisati rapera, asi mamiriro acho akasununguka kupfuura zvazvaive mwedzi mishoma yapfuura. Hutachiona hahuna kuita kuti zvive nyore kune vanoronga chiitiko: sebakatwa reDamocles, yakasimbiswa mitemo yakatenderedzwa pamusoro pekutengeserana fair uye kuronga chiitiko.
Mushandirapamwe unoramba uripo wejekiseni, kusanganisira chiziviso chinokatyamadza chakaitwa neFederal Minister of Health chekuti vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba kupfuura zvaimbofungidzirwa, ive nechokwadi chekuti zviitiko zvekutengeserana pachiyero cheSPIEL muEssen zvinogona kuitika zvakare mushure menguva refu yekuregererwa. Vagadziri veGamescom vakambokanzura uye vakatamisa mutambo wemitambo kuInternet - zvaive zvisina kujeka muzhizha kana Friedhelm Merz Verlag aizokwanisa kugamuchira International Game Days sechiitiko chepasaiti. Ipapo kwakauya shoko rokudzikinura muna July: Zvinobvira kuronga muhoro dzekuratidzira dzeEssen.
SPIEL'21 pasi peCorona mamiriro
Havasi vese vaparidzi varipo, sekuzivisa kwakaita Asmodee pakutanga kuti yaisazotora chikamu gore rino. Njodzi dzinogona kuitika dzehutano dze "vashandi, shamwari nevatambi" dzaive dzisingaverengeke, akadaro. Zviri pachena kuti SPIEL'21 ichave yakakosha, pamwe yakasarudzika yekutengeserana munhoroondo yeInternational Game Days - munzira dzakawanda. Nekuti vamwe vatambi vanoita zvechinyakare vari ve "inventory of the fair" vasipo. Nekuti fairi ichange izere, asi kwete semazuva ese. Nekuti matikiti akasarudzika. Nekuti kudzivirirwa kwe corona kana bvunzo isina kunaka inofanirwa kuratidzwa. Nekuti zvinosungirwa kupfeka mask. Nekuti zvidzoreso zvekubvumidzwa zvichange zvakaomarara. Nekuti cajon backpacks haichakonzeri maziso eblue, asi matrolley anoramba achikonzera ropa zvitsitsinho.
Uye zvakare nekuti manzwiro ane chekuita nechiitiko chikuru anongoerekana aita seasinganzwisisike. Kupedza nguva nemazana kana kunyange zviuru zvevanhu mukamuri imwe - kunyangwe yakakura? Mumwe anogona kutya mushure menguva refu yekuonana kwakaganhurirwa. Unogona kuzvinzwa chaizvo: Kune vateveri vari kufanoshanyira kunhandare yekutengeserana gore rino nekuti havana chokwadi chekuti ranga risiri dambudziko risati rasvika denda recorona. Zvinotora ushingi kushanyira SPIEL'21 - izvo, zvakare, neimwe nzira itsva. Famba-famba nemuhoro usina hanya zvachose uye wogara pasi pamatafura emitambo, pamwe nevasingazivi zvakare? Iwe unoshuvira vashanyi kudaro, asi iwe unozivawo panguva imwe chete: Kunzwa kunyorova kunonzwika kunyangwe paine mufaro wese.
SPIEL'21 yakanaka yemanzwiro makuru: kusanganazve, kusangana nevanhu, kunakidzwa nenguva, kurima vanobatikana, kuwanazve zvakajairika - zvakare maYoutubers, mablogiki, mapodcasters echiitiko, kune avo kushanyira fairi chinhu chakatanhamara mumakore akajairika, asi. neimwe nzira asi hupenyu hwemazuva ese hunoratidza kuti gore ra2021 richave rakasiyana zvachose.
“Kunyangwe MUTAMBO uyu ukava wakasiyana, ndinofara kuti uri kuitika nematanho eCorona asingaregererwe, izvo zvakakosha. Ndinovimba tese tinokwanisa kuita chikamu chedu kuti chiite chiitiko chikuru. " - Dimitrios Barbas - Boardgame Greek
Zvikonzero zvekushanyira trade fair zvakati siyanei kupfuura mumakore apfuura. Chokwadi, kuchave nemitambo nemitambo kwenguva yakareba, asi gore rino - kupfuura nakare kose - ndezvezvimwe zvinhu: "Mitambo yebhodhi inyaya diki kwatiri gore rino", anonyora Simon kubva kuYouTube chiteshi "BrettMan"(kumugero) “Chekutanga, tiri kutarisira zvikuru kupinda zvakare mudzimba dzezviratidziro tsvene. Kutengeserana kwakanaka kunzwa pasina PC, misangano ye zoom uye matambudziko einternet ”. Tsananguro ingadai ine nzara, anodaro Simon. Ari kutarisira kutamba gumi nemaviri emitambo isingazivikanwe - pasina kudzidza! “Gara pasi, teerera, tanga…. haa, ndazvishaya."
Monti kubva"Board game live"(kumugero) iri kupemberera kutanga kwayo paCorona debut ye SPIEL'21: Sezvaakaratidza, iyi inguva yekutanga paMazuva Ose eMitambo Yemitambo - "chinondikonzera zvakanyanya ndechekuti aura inogona kunyatsonzwika". Monti iri kutarisirawo kusangana nevanodhindana nevaparidzi, vakaita saUwe Bursik wekuSkellig, live. Uye ipapo pane tarisiro ye "kungobuda zvakare uye kusangana nechimwe chinhu" - zvinonzwisisika, zvishoma zvakafamba kwenguva yakakwana, dzimwe nguva hapana zvachose. Monti angade kutora "mitambo uye zvinoonekwa" naye.
Kukwanisa kugovera nguva dzekutamba nevamwe zvakare chiitiko chisina kujairika mushure memwedzi yakawanda. Mufananidzo: André Volkmann / Archive
"Kuona iyo SPIEL zvakare mushure memakore maviri uye kufamba nemumikoridho uye rega zvese zvive nemhedzisiro", ndiyo nzira iyo "Mutambo webhodhi Greek"(kumugero) Zvaanotarisira kune International Game Days 2021. Ndizvo "isu tese tiri kutarisira. Pakupedzisira kururamisira kwemuviri zvakare, kwatinogona kuve nemitambo mitsva yakatsanangurwa kwatiri uye kutamba mutambo neshamwari kana vatorwa vakazara kubva pasirese. Dimitrios Barbas angadewo kuita shamwari itsva: "Mubhodhi yemutambo bubble yesocial media kune vanhu vakawanda vakanaka vari kufamba, sevanhu vakazvimiririra, mablogiki, YouTubers, podcasters kana kunyange vamiriri vevaparidzi." Vakawanda vachange vari paSPIEL uye ndiyo "mukana wakanakisisa wekuchinjana mazano, taura mhoro kana kukurukura kwakanaka."
Uye ipapo kune mitambo. Mutambo webhodhi wechiGreek unosanganisira The Red Cathedral (KOSMOS), Maracaibo - The Distance (DLP Games) - "Basi mutambo mumwe wemitambo yandinofarira uye ikozvino nekuwedzera, mabhodhi maviri akaiswa akawedzerwa" - uye The Glass Street ( Tierra del Fuego) pamusoro pechinyorwa. Mutambo wekupedzisira webhodhi wakadhindwa zvakare, uchionekwa kekutanga muna 2013, "mutambo waUwe Rosenberg wandisati ndatamba," anodaro Dimitrios. Anokoshesa Rosenberg. Uye: Galaxy Trucker kubva kuCzech Mitambo Edition / Heidelbär Mitambo, mutambo wakadzokororwa une mifananidzo mitsva iyo "inofanira kunyatsonaka". PaSPIEL'21, maGreek anotamba mitambo yebhodhi anogona kuzvionera ega kuti vakarurama sei nekuongorora kwavo.
"Kungotamba nevanhu vanotonhorera, nguva yakanaka." - Christoph - Zvirinani Bhodhi Mitambo
Zvirinani zvino zvave kujeka: SPIEL'21 iri zvakare nezvemitambo - kwete zvemanzwiro chete. Asi zvakare nezve manzwiro: "Kupfuura zvese, ndiri kutarisira kumhepo uye kuti ndikwanise kunakidzwa nayo nevamwe vakawanda vanofarira mutambo webhodhi, asi zvakare kukwanisa kuiumba," akadaro "Bhodhi mutambo panther"(kumugero) Ndiye imwe yenzira diki pachiitiko. Chris anoongorora mitambo yebhodhi paYouTube uye anopa mazita aanofarira. Anga achitarisira zvemukati kwerinenge gore, saka akatanga apo coronavirus yakaomesa mamiriro echiitiko. Kuna Chris saka zviri pachena: "Ndinovimba kukwanisa kutaura kana vaviri nevanhu vane pfungwa dzakafanana uye pakupedzisira kukwanisa kusangana nevamwe veYouTube / blog / Instagram vatinoshanda navo". Uye kana maparera emutambo mumwe chete kana maviri apinda muhunde yake, “Ndiri kufara zvakanyanya”.
Vaviri ava vave mubhizinesi kwenguva refu ne "Zvirinani Board Games"(kumugero) Christoph naThomas vagara vakagadzwa munzvimbo iyi - vanogara vachitarisira chirongwa, zvakare paSPIEL'21: "NaThomas, Dennis naFlo tinoita board game boot camp svondo rese uye tichibhejera zvakananga pane zvitsva. Ingotamba nevanhu vanotonhorera, nguva yakanakisa, ”anodaro Christoph nemufaro. Ari kutoyangarara pamusoro peiyo hype wave yeZera re Empire 4 uye nekudaro ari kutarisira kubhodhi mutambo Clash of Tsika. Ari "mumoyo chaiwo wemutambo webudiriro". Akafarawo kuti pakupedzisira aona munhu wese zvakare - shamwari, vaunoshanda navo, vanyori, pamwe nevatsigiri nevaoni vechiteshi.
Kune vazhinji vateveri zvinofadza kusangana nevanyori vaanofarira pamutambo. Mufananidzo: André Volkmann / Archive
Zvakajeka kwete anofurira ari munzira Hilko kubva"Du bist Dran"(kumugero) - haasi panzvimbo, asi achiri kufara. Nekudaro, kune yekutengeserana fair 2022. Hilko inyanzvi kana zvasvika pamitambo kubva kune vaparidzi vekunze. Pakati pezvimwe zvinhu, ane zvaanoda kuSouth America neAsia. Izvi ndizvo zvakare kurudziro yake yeSPIEL'21: “Scout! Uyu mutambo wemakadhi eJapan unoshamisa naKei Kajino wave kuburitswa neOink Games, zvichiita kuti usvike kune vanhu vakawanda kekutanga. Ini ndinoda kuzvitsanangura semusanganiswa wekupenya wakatariswa uye futschikato, "anotsanangura Hilko. Dzimwe nguva anoona maparera ayo vamwe vasingatarise muhuwandu hwemazita ebhodhi. “Nekuda kwevaparidzi vashoma vanobva kuAsia vanogona kuuya panguva ino, ndinofara kuti Majlis Shabab ndiyo kambani yekutanga inotsikisa kubva kuQatar kumirirwa pamutambo uyu,” anotsanangura kudaro Hilko. Pandakataura nemuridzi wemuparidzi, ndakaziva kuti kuchine mitambo yakawanda munyika dzeArab iyo pasina anoziva nezvayo ”. Hilko akazviitira basa kubva paruzivo urwu: Anoda kuenderera mberi nekutsvaga mune iyi nzira.
nokuti Mitambo dinosaurs (kumugero) SPIEL'21 muEssen inofanira kunge iri nguva inonakidza - vane ruzivo vanofurira vanoziva chiitiko, kutengeserana fair uye mazhinji emitambo mitsva yebhodhi. Zvakangodaro, maYoutubers maviri ari kutarisira "maparera ese kubva kune vadiki uye vasingazivikanwe vaparidzi". Zvakawanda sei mazuva emitambo yepasirese akakosha zvakare kune veterans vechiitiko anoratidzwa: "Apo adrenaline iri kupomba nemutsinga dzako kusvika kuzere uye iwe uchipinda muhoro dzakatsveneswa dzizere netarisiro", ndozvakaita 'Dinos' Melanie uye. Angelo anotsanangura zvavo Kutarisira kuEssen trade fair.
Typical Ruhrpottschnauze (Ewiger Zweispalt: Dortmund!), Zvisinei, zvinonzwika kubva kuna Kaddy naSebastian von Game frit (kumugero) izvo zvinhu zvitatu zvekutarisira kune zvakanyanya-zvisina kupfupikiswa uye mune yekutanga: “Waaaaas? Vatatu chete? Oh murume! Iye zvino zvave kuita kunyengera ... Totora here mabhawa echokoreti anopisa ayo atinogara tichidya mupaki yemotokari yepasi? Kwete kwete kwete, zvakare flat. Tinoda kuonazve vanhu vakawanda vanyanya kudiwa nesu here? Aihwa! Too bombastic! Ngatitorei akati wandei emitambo mazita anozoita gaka saradhi nemvura yesoseji? Aiwa, zvisingafanoonekwi. Hmmm, chii ipapo. Zvichida chiitiko chitsva chekunhuwa chatichava nacho gore rino neSchnautz nasal pillows? Ah mudiwa, hatizive. Kana kuti ndiyo inopisa yakapfava ice cream, iyo ine mega-inopisa yakasvibiswa nemhando dzakasiyana-siyana uye magumo - kwete, zvirokwazvo kwete, ivo havapo, sezvo vanga vasina makore matatu. Kana kuti zvakadini nazvo: ruzha rwakanyanya pamberi pehoro rwakanyatsonaka zvisingatsananguriki? Kwete kwete kwete, ikozvino tinoziva, ichange ichimhanya nemumahoro nekuda kwekuti Holterdiepolter muparidzi ari kushambadza zip tsvuku bhegi ??? Ah, handina zano ... Pamwe tichangozvisiya pane iyo trade fair yadzoka, zvese digitally uye muhupenyu chaihwo. Wooooooo…. "
French fries chipingamupinyi!
Kutaura nezve fries, Robert ari kutarisirawo mberi Board game guru (kumugero) - nenzira, kwete kuvhiringika nebhodhi guru guru: "Tarisa mberi kuongorora mahoro, kuwana chero mitambo mitsva yausina kunzwa uye zvechokwadi currywurst fries tsvuku nechena". - French fries barriers ndizvo zvavanotaura pano. "Kunaka kwangu kwekupedzisira kwaive kuBremen muchirimo 2020", anowedzera Robert. Ari "pakubvisa". Mushonga wake: "Pakupedzisira tamba zvakare kusvikira chiremba auya."
French fries barriers seFrench fries barriers inofanira kuziva potgamer Benni (kumugero) Anonyanya kutarisira "fair air". Ehe, nevashanyi vashoma muhoro panguva imwe chete, zvinofanirwa kunge zviri nani kupfuura mumakore denda risati rasvika - masks anomedzawo kumwe kunhuwa, kuti asangobatsira kurwisa Corona. Chero zvazvingava, Bennis anoziva kuti SPIEL'21, nekuda kwechinodiwa chemasikisi, "hainyatsoenderana nezvaunosangana nazvo". "Asi kunzwa kwekugona kufamba nemumahoro, kuona vanhu vachitamba, kukwanisa kunakidzwa nekudyidzana uye kuti nevanhu vanobva kune dzimwe nyika netsika, izvo zvagara zvichindiitira zvakanaka uye panguva ino ichave kunzwa kwakanakisa handizotorwe kwandiri."
Iyo "Potti" iri kutarisirawo kukuona zvakare: "Kuva nekubata kwepedyo nevanhu. Kukwanisa kuchinjana mazano pamusoro pezvese. Zvinhu zvakanaka uye zvinhu zvinokufambisa. " "Kupunyuka kudiki kubva kuhupenyu hwezuva nezuva" kwake kunosanganisira mitambo pakupedzisira. Netarisiro yese yeSPIEL'21, Benni haavanzi izvo zvingafungwa nevamwe vanhu: “Chokwadi, zvinhu zvakawanda, zvirinani kwandiri, zvichava nekunakidza uye kusajairika mushure. Vanhu vazhinji, zvakare vanobva kumarudzi akasiyana, masks etc. vanozove nezvavanoita pandiri, asi ini ndichiri kutarisira chaizvo uye ndichazvifarira zvizere sezvinobvira. "
Der Mutambo webhodhi teddy (kumugero) pakutanga anofara pamusoro pezviri pachena, zvinoti "kururamisira kuri kuitika zvachose". "Nekuti kwandiri, mushure mematambudziko ese nguva pfupi yadarika, iri nderimwe danho rekudzokera kune zvakajairika. Uye zvinonzwa zvakanaka ”. Kuburikidza nekuzvivaraidza kwake kuYotube, akasvika pakuziva vamwe vanhu kubva kubhodhi mutambo wechiitiko vanogona kuzosangana munhu. "Izvi zvinosanganisira vanyoreri vangu, vamwe Youtubers pamwe nevashandi vevabudisi. Vazhinji vevanhu ava vanongozivikanwa nekunyorerana tsamba. "
ari Board game guard (kumugero) ari pakati pekuronga. Vaviri Youtubers Pam naMicha vari kutarisirawo chikamu che "zvakajairika". Kuwedzera kune ese magimmicks, ivo vanonyanya kuda kuona shamwari uye kusangana neshamwari nyowani uye "ona vamwe Youtubers nemabloggi vanogara (uye kwete chete neZoom) uye kusvika pakuziva mumwe kana mumwe muparidzi zviri nani. "Kwatiri zuva pamutambo izororo uye tinopemberera 'hupenyu' pano."
Kuronga pamwe kwatopedzwa kubhodhi mutambo podcast - hapana imwe nzira yekutsanangura mhinduro yako yakazara kwatiri. Asi pamwe ndiwo mufaro wakanyanya, nekuti kuna Björn ndiyo yekutanga SPIEL muEssen: "Masutukesi anenge atozara, rwendo rwekuenda kuEssen rwava pedyo. Kune vakawanda PAKUPEDZA ZVAKARE, kwandiri PAKUPEDZA. GAME yangu yekutanga kwete chete se "mugadziri wezvemukati" asi sese. Zvakatora nguva yakareba, kazhinji zvimwe zvinhu zvakapindira. " Kwaari, SPIEL'21 inonzwisisika "chiitiko chakakosha". Iyo pasuru yakazara saka zvakare inowanikwa ipapo ipapo: “Tiri muEssen kubva Chitatu kusvika Svondo. Mazuva mashanu munzvimbo yekugara yakagovaniswa chete ne "vangu podcasters". Zvose zvinoenderana nechido chedu. Sababa vemapatya muzera rechidiki, iyi ichave shanduko huru, iyo mudzimai wangu anondibvumira uye yandinotenda zvikuru. " Björn anodawo kuona avo vaanongoziva paInternet chete vanogara muEssen: “Musangano uyu wevanhu vazhinji vepanzvimbo yedu yekuzvivaraidza ndiwo unoita kuti runyararo runyanye kundinakira uye ndinofara nezvemunhu wese wandinosangana naye panguva yeMess. chat face to face. ”
Basti kubva kubhodhi game podcast pane vashandi vake, kambani yevamwe nemitambo yakawanda - pamusoro pezvose Messina 1347 naRaúl Fernández Aparicio naVladimír Suchý, mutambo webhodhi wakaridzwa panguva yedenda. Mashura akaipa? Tinovimba kwete. Zvakare zvaMario vom Board mutambo podcast (kumugero) SPIEL'21 ichava yake yekutanga. Iyo "special atmosphere", sekutsanangurwa kwazvinoitwa nemumwe wake podcaster, ichanyudzawo Mario - kuburikidza nemasiki! - uye tamba zvitsva uye usangane neshamwari uye "zviso zvaunoziva". Stefan anozvionawo saizvozvo.
Iwo mablogger, podcasters uye Youtubers vari kutarisira zvakawanda muEssen - asi vese vanobvumirana pachinhu chimwe: Pakupedzisira kusangana nenharaunda zvakare.
Mitambo muhoro shanu
Gore rino SPIEL'1 ichaitika muhoro 2, 3, 5, 6 uye 21, uyewo muimba inozivikanwa muGaleria yeMesse Essen. Mikorido yakakura uye zviteshi zvekuuraya hutachiona ndiwo maviri ematanho ari pachena ehutsanana, mukuwedzera kune humbowo hwekubaiwa, kuyedzwa kwakashata uye chinodikanwa chekupfeka mask. Uye: Mahoro anopihwa 100 muzana mweya wakanaka, inodaro mu Nhungamiro kune SPIel'21, iyo inogona kuwanikwa pawebhusaiti yemurongi. Rumwe ruzivo rwakadzama runowanikwa online pa: www.spiel-messe.com.
Zvichakadaro, zvakadaro, kurekodha kwevanobatika kuburikidza neLuca app pamasitendi kunogona kugoverwa, sekuronga kwaFriedhelm Merz Verlag nguva pfupi yadarika. Chimwe chinhu chachinja, zvisinei: Kubva muna Gumiguru 11th, hapachazove nechero bvunzo dzevagari vemahara muNorth Rhine-Westphalia. Kana iwe uchida humbowo, unofanirwa kuchera muhomwe yako uye kubhadhara bvunzo. Mutengo weizvi unotarwa nezviteshi zvekuyedza uye nekudaro nemusika - masangano evatengi anotora mutengo uri pakati pegumi nemasere kusvika makumi mana emaeuro, vamwe vanopa bvunzo vanoitawo bvunzo dzekukurumidza kwemaeuro gumi nemana.
Iwo ebvunzo masimba pasaiti ane mashoma, varongi vanokurudzira kuti iwe uzviedze iwe usati wasvika. Ani naani anoda kuti smear itorwe pa trade fair anofanirawo kuita nguva yekuti aite izvi. Inowanikwa online pa: app.no-q.info. Nzvimbo yekuyedza iri pakati pemusuwo wekupaka mota P6 uye nzira inoenda kuHoro 1A. Ichasvikika kubva kunze. Munharaunda yehoro dzezviratidziro kune zvimwe zviteshi zvekuyedza munzira yeRüttenscheid uye chiteshi chikuru chechitima.
Mufananidzo wakadaro: Paive nechekare vanopfeka masiki vakagutsikana muna 2019. Mufananidzo: Volkmann / Arciv
Zvikasadaro, hapana zvakawanda zvachinja: Kune matani emitambo mitsva yebhodhi uye matafura pamastand kuti uvaedze. Vanenge 600 varatidziri vanobva kunyika dze42 vachange varipo gore rino, sezvakasimbiswa naDominique Metzler kubva kuFriedhelm Merz Verlag, mutori wenhau Frank Zirpins uye sachigaro weSpieleverlage association, Hermann Hutter, pamusangano weSPIEL'21. Gore rapfuura pakanga paine 400 varatidziri kubva kumarudzi makumi mana neimwe paiyo yedhijitari yekutengeserana fair - saka pane yakajeka kuwedzera kune-saiti mashandiro. Chero ani aitya kuti kutengeserana kwekutengeserana kwaizove kushoma kune dzimwe nyika zvino anogona kutura befu. Vatsikisi nevanyori vari kuratidza zviuru zvitsva zvigadzirwa - muna 41, gore risati rasvika denda. zvisinei, yakanga iri 1.500 huru. Kuti utangezve mushure menguva yakareba yemamiriro ezvinhu asina kujeka, zvisinei, mutsauko hausi kukanganisa. Pane kudaro. Kwagara kune mitambo inodarika yakakwana muEssen.
Indasitiri iri kuitawo zvakanaka, sekujekesa kunoita Hermann Hutter. Kukura kwezvikamu gumi nezvina kubva muzana kwakazara uye nenhamba mbiri, asi zvakare kwakadzikira pane gore rapfuura. Panguva iyoyo, indasitiri ine "corona effect" yakakura neinoda kusvika 14 muzana. Zvinoshamisa ndezvokuti Hutter anotsanangura kuti boka racho rakawedzerwa, kunyanya pakati pevakuru. Kare, zvaive zvechinyakare vana vakawanda uye vechidiki vairatidza kufarira kwakawedzera mumitambo nemapuzzle.
Zvese zvakagadzirirwa yekutanga SPIEL muEssen yerudzi rwayo.Ndinovimba ichave yekupedzisira fair pasi peCorona mamiriro. Nekudaro, izvo zvakare zvinoenderana nemunhu wese.
Nyika Itsva - Deluxe Edition * tenga
Kare MicroMacro Mhosva Guta 2 - Imba Yakazara iri pano: 16 nyaya nyowani
Inotevera SPIEL'21 inopemberera kutanga kutsva: iyo yekutengesa inoratidza maitiro emitambo yemwaka
Nyowani Roccat mbeva yevatambi: Kone XP iripo
Kupfura mutambo nezve furo miseve: Nerf Legends yakaburitswa
Mega Man Adventures: Bhodhi mutambo wakavakirwa paCapcom classic
Muedzo weKudonha 76: Wastelanders inounza iyo online Fallout panjanji